The Blog About Life – Blog Created By Bijay Khadka About Life
प्याकेज डिल अन्तर्गत १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपाल लगायत जम्मा १६ देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्‍त गरेका थिए।
निलो रङका देशहरु एसियाली देशहरु हुन् ।
नेपालले सं.रा.सं.भन्दा पहिले नै FAO- 1951, UNESCO-1952, WHO-1953, ECAFE- 1954 को सदस्यता पाईसकेको थियो ।
UN University जापानको राजधानी टोकियोमा सन् 1973 मा स्थापना भयो।
January 30, 2017 January 30, 2017 vicbijayLeaveacomment
हजुर सर सप्पै छ। एसएलसीको सर्टिफिकेट, जन्मदर्ता, बाबाको नागरिकता…।
खोइ बुवा आमा को आउनुभा’छ?
‘सुवास कोइराला’ प्लस टु पढ्दादेखिकै मेरो मिल्ने साथी हो। गत महिनामात्र लोकसेवामा नाम निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा जागिर सुरु गरेको । साथी यतै भएको कारणले उसैलार्इ भेट्ने बहाना बनाएर म १५ दिनका लागि मुस्ताङ घुम्न आएको हुँ। त्यस दिन साथीको कार्यालय गएको बेला मैले प्रत्यक्ष सुनेको सम्बाद हो यो।
पुसको दिउँसोको ४:३० बजे नै साथीको काम सकियो र खाजा खान त्यहीँ नजिकैको होटेलतिर छिर्यौं। सुबासले भेज म:म अर्डर गर्यो। पाँच मिनेटपछि एउटी युवती प्लेटमा म:म लिएर आइ। मुस्ताङको स्याउ जस्तै राता गाला, बाटुलो अनुहार, पिठ्युसम्म झरेको कपाल, गहुँगोरी, भर्खरै बैंश भरिदै गरेकी त्यो युवतीलाई देख्ने जो कोहिले पनि उसको बर्णन नगरी बस्न सक्दैन। म:म टेबलमा राख्दै हामीतिर पुर्लुक्क हेरी र फेरि किचनतिरै छिरि। हामी पनि अल्लारे न परियो। पुन: उनलाई जिस्काउने मन भयो। ‘पानी दिनुस् न’ साथी फ्याट्ट बोलिहाल्यो।
उसो भए त जन्ति जान पाइएला जस्तो छ नि? म उसलार्इ जिस्काउँथें। नजिस्का न यार। उ भने सिरियस हुन्थ्यो। कहिले फुलमायासँग एकान्तमा भएको कुराकानीको रेकर्ड सुनाउँथ्यो । ‘हजुर मलाई छोडेर जानुहुन्छ होला? मलाई एक्लै छोडेर कहिल्यै पनि कतै नजानुस् है। जहाँ गएपनिसँगै लैजानुस् है। फुलमायाले भनेकी हुन्थी। सुबासले सम्झाउँदै भन्थ्यो। हुन्छ, फुलमाया हुन्छ। म कहिल्यै छोड्नेछैन। तिमी र म जिन्दगीभर सँगै बस्नेछौं । एकपटक पोखरा आउँदा कुरैकुरामा सुवासले सुनाएको थियो। एक दिन फुलमायाको बाबा आमा मामाघर गएका थिए। सदा जस्तै अफिस सकेपछि खाजा खान गएको थिएँ। त्यो दिन त पुग्नासाथ छ्याङ र सुकुटी टकारी। तिमीले पनि सँगै खाने भए खान्छु नत्र खान्न भनेर मैले घुर्की लगाएँ। उसँगै बसेर खान सहमत भई।
विस्तारै साँझ पर्दै गयो, साँझसँगै छ्याङको मात पनि बढ्दै गयो। बैंशको आवेगमा हो कि नशाको मातमा उस्ले मलार्इ सम्पुर्ण तन मन समर्पण गरी उ मभित्र हराइ, म उभित्र हराएँ। अलिकति उ ढल्किइ मतिर, अलिकति म ढल्किएँ उतिर, दुई फरक मन फरक शरीर क्षणभरमै एक बने। भोलिपल्ट बिहान ब्युँझिदा उज्यालो भैसकेको थियो। म हतार हतार कोठामा फर्केको यार। कहिले काहीँ त मलाई आरिस लागेर आउँथ्यो। ‘जसले मह काड्छ उसैले हात चाट्छ’ म प्राय चुपचाप बस्थें। अर्को भेटमा उसले फुलमायाकै प्रसँगमा भनेको थियो। केही दिन अघि मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न गएका थियौं। मुक्तिनाथलाई साक्षी राखेर वाचा गरेका छौँ जिन्दगीभर नछुट्टिने भनेर। उ गम्भिर देखिन्थ्यो।
‘यदि त्यही केटीलाई ब्या गर्ने होस् भनि बाटो लागिहाल्, यो घर बस्निहोस् भनि हाम्ले भनेको मान्नपर्छ ।’ सुबासले जवाफ फर्कायो। ‘चाहिंदैन मलाई कोही, कहिल्यै झुक्किएर पनि टेक्ने छैन यो घर, एउटा छोरो मर्यो, सम्झे हुन्छ।
जा-जा तँ गैहाल्, सरकारी जागिर खाएँ भनेर ठूलो बन्छन? चाहिंदैन तँ गैहाल्।’ उसका बाबु झर्किए। आमा पिलपिल रुन थालिन तर अरुको जिद्धीसामू आमाको केही लागेन।
हामी झोला टिपेर हाम्रो बाटो लाग्यौं। त्यसदिन मेरो कोठामा गएर बस्यौं। उ धेरै तनावमा छ बडो थकित देखिन्छ। उसको घर परिवारको त्यस्तो व्यवहारले म आफुसमेत थाकेको छु। साथीलाई सान्त्वना दिँदै भनें। ‘किन पिर मान्छस् यार। साथी दिने म छंदैछु नि। अब यथासक्य छिटो बिहे गर्नुपर्छ। परिवार त पछि ठाउँमा आइहाल्छन नि।’
साथीले भोलि बिहानसँगै जाने भन्दैथियो। मेरि आमा गाउँबाट उपचारको लागि पोखरा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले म सँगै जान सकिन। साथीलाई म फागुन १४ गते मात्र आफु आउने कुरा सुनाएँ। साथीले दु:ख मन गर्दै भन्यो-‘मेरो बिहेमा जन्ति भनेनी लोकन्ती भनेनी तँ मात्र त होस्। जसरी नि आइज् है।’ विश्वास गर यार आउँछु भनेपछि आइहाल्छु नि। मैले जवाफ दिएँ। अनि त्यहीँ नजिकै कन्सल्टेन्सीमा गएर जहाजको टिकट काट्यौँ। तारा एयरको टिकट, उडान फाल्गुन १२ गते बिहान ७:५५ बजे।
फेसबुक खोलेँ। फेसबुक खोल्नासाथ एउटा समाचार देखा पर्यो। ‘आज बिहान ७:५५ बजे पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कबिहीन।’ मुटुको धड्कन एक्कासी बढ्यो, श्वास रोकिएला जस्तो भयो, हात खुट्टा थर्थरी काप्न थाले, संसार नै घुम्न थालेजस्तो लाग्यो। भगवानसंग प्राथना गर्नु बाहेक मसंग अरु कुनै बिकल्प भएन ।
त्यसबीचमा पटक पटक फुलमायालाई पनि फोन गरेँ तर सम्पर्क भए। उसको घर परिवारको नम्बर पनि थाहा भएन। फुलमायालाई सम्पर्क गर्ने कुनै उपाय मसंग भएन। करिब चार घण्टापछि बिमान म्याग्दीमा दुर्घटना भएको अवस्थामा फेला परेको र बिमानमा सवार चालक दलका सदस्यसहित सबै यात्रुहरुको मृत्यु भएको खबर आयो। छाती पिटेँ, धेरै रोएँ कराएँ तर सुबास कहिल्यै नफर्किने गरी संसार छोडेर गयो।
बस्दै थिएँ, पत्रिकावाला दाई किरिरिरी साइकलको घण्टी बजाउँदै आए र पत्रिका हुत्याएर गए। भुइँको पत्रिका उठाएँ। पत्रिका खोल्नासाथ एउटा तस्बिर देखापर्यो। समाचारको शिर्षक थियो थियो-‘तीन दिन अघिदेखि हराइरहेकी मुस्ताङकी फुलमाया तामाङ मृत अवस्थामा फेला, साथमा सुसाइड नोट भेटियो।’
आँखाबाट आँशुहरु बर्बरी खसेँ। मैले आँशु बगाउनु भन्दा अरु गर्न सक्ने पनि केही थिएन। मन थामेरै भएपनि समाचार पूरा पढेँ। समाचारको अन्तिममा फुलमायाले लेखेको ‘डेथ नोट’को सारांश यस्तो थियो। ‘सुबास, फूलबाट सुबास नै खोसिसकेपछि फूलको कुनै अर्थ रहँदैन। हामीले मुक्तिनाथलाई साक्षी राखेर खाएको बाचा कसम म तोड्न सक्दिन। फागुन १५ का दिन तिम्रो हातबाट सिन्दुर लगाउने सपना अधुरै हुने भो। तिमीले मलाई एक्लै यो संसारमा छोडेर गयौं त्यसैले म पनि तिम्रै पछिपछि आउँदैछु।तिम्रो हातको सिन्दुर लाउने धोको अब स्वर्गमै पुरा गर्नेछु। तिमी र म सदाका लागि एक हुनेछौं। हामीले गर्नेछौं स्वर्गमा बिहे।
सुबास, म आउँदैछु पख सुबास्….।।’
अलबिदा सुबास फुलमाया …
ⓒ देव सागर @ http://setopati.com/sahityapati/42306/
March 3, 2016 vicbijayLove1 Comment
ⓒNot my own creation!
March 2, 2016 vicbijayLeaveacomment
खाना खादा ढुङ्गा परोस,
पानी पिउदा ढल परोस्
सुत्ने बेलामा निन्द्रा नपरोस्
टाउको भरि जुम्रा परोस्,
जिउमा काउसो झरोस्
हिंडदा ठेस लगोस्,
गुडदा ब्रेक नलागोस्
बाहिर निस्किदा असिना परोस्
ओत लाग्द छाना झरोस्
आँखामा फुलो परोस्,
नाकमा खोर्सनीको धुलो परोस्
महलबाट झुपडीमा झरोस्,
सम्पत्ति जति खरानी भएर उडोस्
भ्रष्टाचारिलाई किरा परोस ………!!!
March 1, 2016 vicbijayLeaveacomment
3. Goodwill Haunting
8. Croods, The Big Hero 6, Up, Turbo, Iron Man,….
March 1, 2016 vicbijay1 Comment